Kaolin isiri-yesimbi zvicherwa, rudzi rwevhu nevhu dombo rinotongwa nekaolinite nevhu zvicherwa. Iyo ine yakanaka panyama uye makemikari zvimiro senge plastiki uye kuramba moto. Iyo ine akasiyana siyana mashandisiro, anonyanya kushandiswa mukugadzira mapepa, maceramics uye zvinhu zvinokanganisa, zvichiteverwa nekupfeka, zverabha mafirita, enamel glazes uye chena simenti mbishi zvigadzirwa, uye shoma shoma repurasitiki, pendi, pigment, kukuya mavhiri, mapenzura, mazuva ese zvizoro, sipo, mishonga yezvipembenene, mishonga, machira, peturu, makemikari, zvekuvakisa, kudzivirirwa kwenyika nezvimwe zvikamu zveindasitiri
Iyo yakanakisa yakakamurwa kuita 325 mesh, 600 mesh., 800 mesh, 1250 mesh, yakagadzirirwa maererano nezvinodiwa nevatengi.
Kaolin isiri-yesimbi zvicherwa. Iyo mhando yevhu nevhu dombo rinotongwa nekaolinite ivhu zvicherwa. Iyo yakachena kaolin yakachena, yakanaka, yakapfava uye yakapfava, ine yakanaka mapurasitiki uye moto kuramba. Inonyanya kushandiswa mukugadzira mapepa, maceramics uye zvinhu zvinokanganisa, uye kechipiri inoshandiswa mukupfeka, mafirita ekuzadza, enamel glazes uye chena esimende mbishi zvigadzirwa.
Iron oxide Nhema
Iron oxide ine upfu pakuonekwa, ine mavara ered, yero, nhema, green, nezvimwewo, uye ine yakanakisa panyama uye makemikari zvivakwa. Simba rekuhwanda simba, yakakwira tinting simba, rakapfava ruvara, kugadzikana mashandiro, alkali kuramba, kumwe kugadzikana kune asidi isina simba uye isingawanzo acid, yakanakisa mwenje kuramba, kusasimba kwemamiriro ekunze, kusagadzikana mumvura uye organic manyoro, yakanakisa ngura kuramba Basa reiyo ultraviolet mwenje.
Main chigadzirwa modhi: iron oxide nhema: 330,722
Iron oxide Tsvuku
Main chigadzirwa yemhando: iron oxide tsvuku: H110, Y101, H130, H101, H190, nezvimwe;
Iron oxide Yero